Qiyaano Dhameystiran - Somalias #1 | mySomali Studios
Qiyaano Dhameytiran waa musalsal aad u xiiso badan oo aad ka daawan kartid qeylonet.com. Musalsalkaan oo xambaarsan sheeko jaceyl, farxad iyo murugo. Welibana aad uxiisa badan waxaad goordhow ka daawan doontaa qeylo.net maalmaha Isniinta, Talaadada iyo Arbacada, Khamiista iyo Jimcaha.
musasalka in aan ka firsado raba
Waa musalsal Jiro bra and good
wll musalsalka axdi iyo amar walid iyo kuwo kle otaxane ah plz plz plz wad mahadsantihiin dhamaantin
J’aimerais regarder vous séries
Plz wll qebta 38 mashaqeneso nagasohagaji fadlan ado mahadsan
Thanks. Hadda waa daawan kartaa